May 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
“သားအိမ်ခေါင်းမှ အလုံးများ” “ဆရာရေ ရာသီမမှန်လို့ ဆေးခန်းသွားပြတာ သားအိမ်ခေါင်းမှာ အလုံးရှိလို့တဲ့” “ဆရာရေ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေပြီးတိုင်း သွေးဆင်းနေတာ အိုဂျီနဲ့ ပြတာ သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ အလုံးတည်လို့တဲ့” ထိုထိုသော ပြောလာကြသော မေးလာကြသော အမျိုးသမီးများရဲ့ အမေး စကား များကို…
Passive Smoking/Secondhand Smoke
“တစ်ဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့” တစ်ဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှုရှိုက်ခြင်းကြောင့်နှလုံး၊ သွေးတိုး၊ ကင်ဆာစသော ရောဂါများရရှိနိုင်ပါသည်။အချိန်မတိုင်မီစောစီးစွာသေဆုံးနိုင် ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူအသုံးပြုရသည့် ရထားများနှင့်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာအားလုံးတွင် လည်းကောင်း၊ တစ်ဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့ကိုရှုရှိုက်မိသူများတွင် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေ့ဆိုသည်မှာ ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ဦးက ဆေးလိပ်မီးညှိထားစဉ် ဆေးလိပ်မှတငွေ့ငွေ့ထွက်နေခြင်း ကို ဘေးထွက်ဆေးလိပ်ငွေ့ Side Stream…
What Should Involve in Your Children's Lunch Box?
သင့်ကလေးငယ် ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ထမင်းဘူးနဲ့အတူဘာစားစရာတွေထည့်ပေးကြမလဲ? အခုဆိုရင် နွေဥတုအကုန်မို့ မိုးတွင်းကိုကူးပြီဆိုတဲ့အခါ ကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မေမေတို့အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို နေ့ခင်းဘက်ကိုအိမ်မှာပဲ ထမင်းဟင်းနဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာတွေကျွေးနေရင်းကနေ ထမင်းဘူးနဲ့ မုန့်ဘူးထည့်ပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် သင့်တော်ရာ နေ့ခင်းနေ့လည်သွားရည်စာတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ထမင်းဘူးဘေးက မုန့်ဘူးလေး ဘာတွေရွေးပြီးထည့်ကြမလဲ? လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများ ရာသီအလိုက် စတော်ဘယ်ရီ၊…
နောက်ဖေးပေါက်မှ တိုးဝင်သူ စအိုမှတဆင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း အိမ်တစ်အိမ်ကို ဧည့်သည်လာရင် ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်ရှေ့တံခါးမှ လာတတ်ကြပါတယ် ။အိမ်နောက်ဖေးပေါက်မှ တိုးဝင်လာရင်တော့ ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရပါ့မယ် ။ထို့အတူပဲ လိင်ဆက်ဆံရာမှာလည်း မိန်းမကိုယ်မှ တဆင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပုံမှန် ဓမ္မတာလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် စအိုမှတဆင့်…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတိုင်းထိုးသင့်တဲ့မေးခိုင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး မိဂျမ်းဘုံတစ်ယောက် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် သူသိ၊ သူတတ်၊ သူဆရာမကြီး။ ဖျားရင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးစပ်သောက် ပျောက်ရော။ အနီးအနားကလူတွေ ဘာလို့ ဆေးခန်းသွားပြနေကြ လည်း မိဂျမ်းပုံ တွေးရင်း ရီချင်သည်။ အခုလည်း မိဂျမ်းဘုံတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရရော။ အမေတို့လည်း ကိုယ့်ကို…
အရေပြားပေါ်ကပ်ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးကပ်ခွာဆိုတာ… အမျိုးသမီးတွေအတွက် သားဆက်ခြားနည်းလမ်းများစွာရှိတဲ့အထဲမှာမှ အရေပြားပေါ်မှာကပ်ရတဲ့ တားဆေးကပ်ခွာအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ Contraceptive patch လို့ခေါ်တဲ့ တားဆေးကပ်ခွာဟာ အရေပြားပေါ် ကပ်ရတဲ့ကပ်ခွာဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီကပ်ခွာလေးကနေ Estrogen နဲ့ Progesterone ထုတ်ပေးပြီး ကိုယ်ဝန်တားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ *ဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲ? အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့လက်မောင်း၊ပေါင်၊ တင်ပါးနဲ့…
Chemical peeling ဒီတစ်ခါတော့ Chemical peeling အကြောင်းသိချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Chemical peel အမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ Chemical peeling ဆိုတာကတော့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေတွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ခွာချလိုက်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ညီညာချောမွတ်တဲ့ အရေပြားကို…
သင့်ကျန်းမာရေး အလေးပေး အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာဆိုတာ သိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု မီးဖိုချောင်ထွက် အသီးအနှံလေးတွေကနေ ကျန်းမာရေးကို တူတူ ရှာဖွေကြရအောင်! 🙂 ၁။ သံပုရာသီး သံပုရာသိးတစ်လုံးနဲ့တင် တစ်နေ့စာလိုတဲ့ ဗီတာမင်စီပမာဏထက် ပိုလျှံပါတယ်။ ဗီတာမင်စိဟာ အဆီကျဖို့၊ သွယ်လျဖို့နဲ့…
နို့သီးခေါင်းမှ အရည်ထွက်ခဲ့လျှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် (သို့) နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေစဉ်မှာတော့.. နို့ဦးရည်၊ နို့ရည်များ ထွက်လေ့ရှိပါတယ်…သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်(သို့) နို့တိုက်မိခင် မဟုတ်ပဲ နို့သီးခေါင်းမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်များ ထွက်လာပါက စိုးရိမ်စရာထွက်နိုင်သလဲ တစ်ခုပါ..ဒီလိုအခါမှာ စစ်ဆေးကုသမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်… ဒါဆို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့…
အဖျားကြီးတိုင်း တက်တတ်တဲ့ကလေး ကလေးငယ်တစ်ချို့က အဖျားကြီးပြီဆိုရင်( ကိုယ်ပူချိန်၃၈°C ) ကျော်ပြီခြေလက်တွေကွေးဆန့်ပြီး အဖျားကြီးပြီး တက်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ ကလေးရဲ့ဦးနှောက်က ကိုယ်ပူချိန်တက်( အဖျားကြီး) တဲ့ ဒဏ်ကို လူကြီးတွေလောက် ခံနိုင်ရည်မရှိလို့ပါ။ မေမေတို့အနေနဲ့တော့ ကလေးဘာကြောင့်ပဲတက်တက် စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့…